Isihlahla se-Okame Cherry: Ukukhula kwe-Prunus Okame Ekhaya Lakho - Izihlahla
Isihlahla se-Okame Cherry: I-Cherry enhle kakhulu yezimbali
Ufuna ukwengeza ifayela le- langa , isihlahla esibomvana esikhanyayo ku-driveway yakho? Ungabheki ngaphezu kwesihlahla se-Okame cherry. Lezi zinhlobo ezingakholeki zePrunus zingenye yama-pops ombala ashaqisayo okungenzeka uwabone esihlahleni sanoma yiluphi uhlobo.
Noma isihlahla singakhuli, senza ukwengeza okuhle engadini yakho, ngenxa yamaqabunga aso aluhlaza anemibala eqinile ewolintshi.
Imikhiqizo Enconyelwe Ukunakekelwa Komuthi We-Cherry Tree:
I-Felco F-2 Bypass Pruners
UDkt Earth Bud noManyolo weBloom
Ukuma okugcwele kwezihlahla ze-okame cherry e-arboretum. Umthombo:
Igama Lesayensi: UPrunus ‘Okame’
Amagama ajwayelekile: Isihlahla se-Okame cherry, i-cherry yaseTaiwan
Umsuka: Imvelaphi yayo yayivela eChina naseJapan, yakhulela eNgilandi
Ukuphakama nokusabalala: 12-40 'ubude no-20-30' ububanzi
Ilanga: Ilanga eligcwele
Umhlabathi: Umswakama, ukukhipha kahle
Amahlamvu Okuluhlaza okotshani, uphenduka ophuzi osagolide noma owolintshi ekwindla
Izinambuzane nezifo: Rot, blight, isikhutha, aphid, isikali, njll.
Lesi sihlahla ekuqaleni sakhuliswa eNgilandi kusuka esiphambanweni se Prunus incisa futhi Prunus campanulata . Umfuyi, uCaptain Collingwood Ingram, wayezama ukudala isihlahla esinezimbali ezikhanyayo ezibomvana, kepha ngaphandle kokubekezelela okubandayo kwezitshalo zabazali. Ngicabanga ukuthi kuphephile ukusho ukuthi uphumelele!
Ngaphambi kokuvuthwa, ikhula ngesakhiwo esimise okwevazi, ngaphambi kokuzungeza njengoba ikhula. Izimbali eziqhakazile ezibomvana nezimhlophe zizongeza izinyanda zobuhle kuzwe lakho, futhi zingatshalwa nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Ukukhiqiza inqwaba yezimbali ze-candyfloss-pink ekuqaleni kwentwasahlobo, izihlahla ze-Okame cherry zilungele izingadi ezincane noma ulayini wokungena.
Uma ufuna umuthi oheha izinyosi ezinjengokusangana, ungabe usaqhubeka. Ama-pollinator azo zonke izinhlobo athutheleka kule cherry eqhakazayo, enezimbali ezifika emasontweni amathathu entwasahlobo. Ibuye ijwayele ukuqhakaza ngaphambi kwezinye izinhlobo ze-cherry, ngombala wokuqala wentwasahlobo.
Uma ungaqhakazi, amahlamvu ahlala emuhle. Ihlala iluhlaza okotshani kuze kube sekupheleni kuka-Agasti, ngesikhathi lapho iqala khona ukujika iphuzi ngokusagolide ngaphambi kokugcina ifiphele ibe owolintshi ojulile nobomvu.
Ukunakekelwa kwesihlahla se-Okame Cherry
Vala i-cherry yezimbali, impova yinyosi. Umthombo:
Sithandwa eningizimu lapho kushisa khona futhi kunomswakama, lesi sihlahla singabekezelela nesimo sezulu esilinganiselayo nesibanda kancane. Eqinisweni, kudinga ubusika obubandayo ukuze buqhakaze kahle ngasekupheleni kobusika nasekuqaleni kwentwasahlobo. Ikhulise uma usendaweni engu-5 kuye ku-9.
Khanyisa & Ithempelesha
Lesi sihlahla sifuna ilanga eligcwele. Qiniseka ukuthi utshala isihlahla endaweni lapho singabonakala khona ukuze uzijabulise futhi inokufinyelela elangeni. Uma uhlala endaweni ebanda kakhulu noma enyakatho, kufanele uyitshale endaweni lapho ithola khona okungenani amahora angama-4 kuya kwayisithupha elanga.
Uma kusimo sezulu esishisayo noma ezindaweni ezingama-9 +, tshala endaweni lapho ithola khona ukukhululeka ezingxenyeni ezishisayo zosuku uma kungenzeka… ukukhiqizwa kwezimbali kuzoba ngcono ngale ndlela.
Uma kukhulunywa ngokunisela, khumbula isimo sezulu esithile ohlala kuso. Uma usendaweni lapho umhlabathi womisa ngokushesha futhi ungatholi imvula eningi, kufanele unisele kaningi kakhulu.
Futhi, engeza isembozo esizungeze isisekelo sesihlahla ukuze ugweme ukoma ngaphambi kwesikhathi. Awudingi ukunisela kakhulu uma usesimweni sezulu esibandayo esithola imvula ethe xaxa. Kungumdlalo wokubuka lapha ... qaphela ukuthi umuthi wakho ubukeka kanjani futhi ulungise ukunisela kwakho kusuka lapho.
Izihlahla ze-cherry eziqhakazayo zingenza kahle cishe kunoma yiluphi uhlobo lomhlabathi. Uma nje inhlabathi idonsa kahle, isihlahla sakho kufanele sikhule kahle. Qiniseka ukuthi inhlabathi yakho imanzi ukuze ikhule kahle.
indlela yokwenza izinwele zakho zikhule isikhathi eside
Le cherry ehlanganisiwe ayenzi kahle ku inhlabathi emanzi ngokweqile noma yobumba , ngakho-ke qiniseka ukuthi uyazivikela lezi zimo zenhlabathi.
Awudingi ukufaka umquba kaningi esihlahleni se-cherry - kanye ngonyaka kuningi. Yinike umanyolo we-nitrogen ophansi ekuqaleni kwentwasahlobo, ukuze ukwazi ukusebenzisa lowo msoco kuyo yonke inkathi yokukhula.
Ungasabalalisa isihlahla se-Okame cherry usebenzisa ama-cuttings aluhlaza nasentwasahlobo egatsha. Bafake ezitsheni ezinendawo yokutshala engenawo umhlabathi bese uyigcina ifudumele. Ungaphinda ufakele, kepha leyo inqubo eyinkimbinkimbi kakhulu echazwa kangcono kumhlahlandlela ohlukile.
Ukuthenwa kuyadingeka ekuqaleni kwempilo yesihlahla sakho uma ufuna ukuzisindisa emthini wezihlahla zakamuva. Ngoba akuyona i- okukhulu Isihlahla, okunye ukuthena ngemuva kokuqhuma kwezimbali kuzosiza ukubumba eminyakeni ezayo.
Nansi inqubo elula:
Ngemuva kokutshala isihlahla sakho, sika ikhanda ku-3 'ngenhla komhlaba bese usika wonke amagatsha abuyele emuva angafinyeleli kathathu.
Vumela amahlumela amasha akhule abe cishe u-10 ″, bese usika ngezansi kwawo ukusiza isihlahla sakho se-cherry ukuphuma.
Sika wonke amahlumela phansi kwesihlahla (okwaziwa ngokuthi amahlumela wamanzi) kanye namagatsha aqhamuka maphakathi nesihlahla.
Qhubeka ulolonge isihlahla sakho se-Okame cherry njengoba ufisa iminyaka eyi-4 yokuqala yempilo yaso.
Uma ufuna ukuheha impova, i-prunus okame iyisinqumo esihle. Umthombo:
Ukuvundisa ngokweqile akuvunyelwe ezihlahleni zama-cherry. Kungadonsela izinambuzane emthini wakho. Uma kwenzeka uthola izinambuzane zihlasela isihlahla, sebenzisa isibulala-zinambuzane ukuze uziqede.
Kukhona ingozi yokubola namabala ezihlahleni zama-cherry. Lokhu kudinga ukuthi uzinisele ngokucophelela. Ukunisela ngokweqile kungadala ukuthi impande ibole. Ngokufanayo, ngaphansi kokuchelela kungaholela emaqabungeni omisiwe azogcina ewile. Isihlahla singabhekana nokulimala nesikhunta. Ukwelapha okulimazayo, kungcono ukuthena izingxenye ezithintekile zesihlahla ukuqinisekisa ukuthi isihlahla esisele sihlala siphephile. Ngamabala amabala, ungasebenzisa i-fungicide.
U. Izihlahla ze-Okame cherry zikhula ngokushesha okungakanani?
TO . Imvamisa, zikhula zizungeze u-2 ′ (0.6m) ngonyaka futhi zikhuphuke ziphume ngo-20-30 ′ ubude, kepha irekhodi eliphakeme kakhulu lingu-43 'ubude!
U. Ngabe izimpande zesihlahla se-cherry zizohlasela lonke igceke lami?
TO . Izimpande zesihlahla se-cherry zivame ukusondela ebusweni bomhlabathi wakho futhi zithumele izimpande eziningi ezingaphezulu kanye namahlumela amaswidi. Qaphela lapho uthola khona isihlahla sakho, ikakhulukazi uma une-hardscaping eduzane.
U. Isikhathi sesimbali se-cherry sihlala isikhathi esingakanani?
TO . Ama-Blooms ngokuvamile ahlala isikhathi esingangenyanga njalo entwasahlobo. Isikhathi sokuqhakaza sincike kwisimo sezulu futhi singenzeka phakathi kuka-Mashi nasekuqaleni kuka-Ephreli kahle.
amakha anuka kamnandi kwabesifazane
I-best push up ezemidlalo ubhodisi
indlela engcono yokupenda izinzipho